Etu esi emefu 1 Day na Copenhagen | Di na Nwunye Maka Uzo
Copenhagen bụ obodo mara mma nke ukwuu, yana nke kachasị mma n'oge ezumike. Anyị gara Copenhagen maka naanị otu ụbọchị, mana achọpụtara ihe ole na ole ị nwere ike ime iji kpoo obodo ukwu a - ọbụlagodi na-erughị elekere 24!
Maka anyị, nleta na mbido Disemba zuru oke mgbe anyị na-eme njem ogologo oge n'etiti Budapest na Nice. Ọ bụ ezie na oyi, na ikuku ihu igwe, abalị bụ ezigbo ihe na oge ekeresimesi dị ndụ n'obodo - ịghara ịkọ maka ogige ntụrụndụ ama ama ụwa!
Ebee ka Ị Ga-anọ
Mgbe ị na-eleta Copenhagen, ịchọrọ ịnọ na mpaghara ọwa mmiri - mpaghara a maara nke ọma dị ka Nyhavn. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị oke ọnụ na mpaghara a, ọbụlagodi n'oge oyi, ebe ọ bụ na N'ezie Copenhagen abụghị obodo ọnụ ala ị ga-eleta.
Agbanyeghị, mgbe anyị nyochachara, anyị na-achọta ọmarịcha ụlọ nkwari akụ ozugbo na ọwa mmiri na Nyhavn akpọ Hotel Hotel. Enwere m obi iru ala ịchọta ụlọ nkwari akụ gburugburu $ 100 USD kwa abalị nke sara mbara, izu ike, na ịdị ọcha kachasị. Ikwu eziokwu, anyị ga-eji ọ paidụ kwụọ ụgwọ ihe anyị kwụrụ maka ụlọ nkwari akụ ahụ ka na- zọpụtara ego maka ihe ọ na-efu ịnọ na mpaghara ahụ!
Enwere nhọrọ nnabata ndị ọzọ na obere ụlọ obibi na Copenhagen, mana maka di na nwunye ji aka ha mee njem otu abalị, Hotel Hotel zuru okè! Ewezuga ịbụ ezigbo ụlọ oriri na ọ comfortableụ thatụ mara mma nke bụ otu n'ime ụlọ kachasị mma anyị nọrọ na Europe, enwere nnukwu nri ụtụtụ nri ụtụtụ nke bịara gụnyere ọnụnọ anyị!
Uzo esi aga na họtelu Nyhavn
Nyhavn bụ ihe nkiri nlegharị anya bụ isi, ọ nọghịkwa ọdụ ụgbọ elu. N'iburu nke ahụ n'uche, ọtụtụ ga-eche na ịnya ụgbọ ahụ dị mma. Kaosinadị, n’eji edosasị ọwa mmiri na Copenhagen ọ na-eme ka okporo ụzọ sie ike. N'ezie, ịnya ụgbọ 10 dị ihe dị ka n'oge ọgba ọsọ nwere ike ịgafe nke ọma otu awa!
N'ikwu nke a, njem ụgbọ njem ọha na nke mara mma na Copenhagen - dịka ọ dị n'ọtụtụ obodo ndị dị na Europe. Sistem n'okpuruala igwe na ala ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala!
Akụkụ kachasị mma bụ ịdị nso nke ọdụ ụgbọ metro kacha nso na ọwa mmiri, ya na Kongens Nytorv (ọdụ metro dị na mbara - sepụ aka na map dị n’elu ma lepụ aka aka ekpe / ọdịda anyanwụ) nke dị nanị nrị 100 site na ọwa mmiri bụ isi na erughị otu. Oge ije 5 site na Hotel Betel.
Ihe ị ga - eme na Copenhagen
Gaghị enwe oge ime otu nde ihe ma ọ bụrụ na ịnọ naanị otu abalị na Copenhagen, mana ị ga - enwe ike ime nke ọma iji nwee ọ enjoyụ na ọnụnọ gị. E kwuwerị, nke a bụ nnukwu obodo mara mma, nke nwere nnukwu nri, yana ụfọdụ ebe kachasị mma n'obodo ọ bụla dị na Scandinavia!
Nke a nwere ike ịbụ otu ihe ị ga - eme na Copenhagen n'ihi na, n'eziokwu, ị nweghị ike inweta ya ebe ọ bụla.
Ugba mmiri Tivoli bụ ogige ntụrụndụ pụrụ iche pụrụ iche nke dị naanị obere nkeji 10 site na Nyhavn. Ọ bụ nrọ dị egwu - ihe ịtụnanya ezumike na-abịa ndụ n'oge ezumike. N'agbanyeghị etu oyi si nọrọ n'abalị ahụ anyị gara, Tivoli bụ ihe anyị gara ịga were were ụgwọ ọrụ kwụrụ anyị ụgwọ.
Tivoli meghere na 1843, ma ọ bụ taa bụ 2nd ogige ntụrụndụ ochie nke ụwa - nwere 4 na-efegharị roller-roasters, njem na-agba agba, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ nchekwa, na ọtụtụ ihe owuwu na ihe ngosi na-adọrọ mmasị! N'oge ọkọchị na oge opupu ihe ubi, a na-ahụ Tivoli maka okooko osisi mara mma na ọdịdị ala mara mma.
Nleta na abalị, Tracy nwere ọ excitedụ ọfụma banyere ele abalị nke Copenhagen site na “Demon”, nke e wuru na 2004!
Anyị na-achọ ịlaghachi na Copenhagen naanị iji hụ ihe dị na Tivoli dị ka oge Ezumike - n'agbanyeghị oke igwe mmadụ na ogologo ahịrị ndị gbara ịnyịnya na-ebute n'oge ama ama obodo.
Otu ihe dị mkpa a na-ahụ maka Copenhagen n'oge oge oyi n'oge oge ọ bụla n'afọ bụ maka ọmarịcha Ahịa Krismas nke na-egosi obodo ahụ.
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike depụta nke ọma dị iche iche Ahịa Krismas, nke ahụ bụ isiokwu ọzọ maka post ọzọ. Kwesịrị ikwu na, ọ bụrụ na ị nwere otu ụbọchị na Copenhagen n'oge oyi, ọ ga-esiri gị ike ịhapụ ha ma ọ bụrụ na ị bi na Nyhavn. Otu n'ime akara ahịa ekeresimesi obodo obodo ahụ na-etolite na mpaghara Nyhavn, bụ ebe a na-agbanye ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ahịa ekeresimesi, na ebe nkiri.
N’abalị n’ime afọ a, Copenhagen na-anụ nri bara ụba, mmanya na-egbu egbu, na achịcha dị iche iche n’afọ niile!
N’enweghị mgbagha, ịga leta ahịa ekeresimesi ma ọ bụrụ na ị nwere otu abalị na Copenhagen bụ ihe ị ga-emerịrị.
Anyị ekwuola banyere nke a dịka mpaghara gị kwesịrị nọrọ, mana ọ bụrụ na ihe mere na ịgaghị ahụ ebe n'ime mmefu ego gị na Nyhavn, ọ ka bụ ebe ị ga-agarịrị.
Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-eche mgbe ha chere maka Copenhagen - ụlọ nwere ọtụtụ agba na-ese ọwa mmiri ndị mara mma. Hotelslọ oriri na ọutiụ boụ, ụlọ nri dị nta, ụlọ ahịa, na -eme ka okporo ụzọ kacha mma n'obodo niile dị na Europe nwee okporo ụzọ.
Nri Scandinavian Omenala
Scandinavia abụghị ebe ị na-eche ozugbo ozugbo ị hụrụ nri ndị kachasị mma n'ụwa, mana ọ bụrụ na ị na-eleta n'oge ezumike enwere ike iju gị anya na ụfọdụ nri kachasị mma na Europe.
Ekwetaghị m? Anyị nwere otu nri kachasị mma nke ndụ anyị na ọnụnọ otu abalị anyị na Copenhagen - zuru ezu na azụ azụ azụ na putney apụl, ihe ịchọ mma Krismas mara mma, na ọbụna Frank Sinatra na-egwu egwu n'azụ! Ọ bụrụ na ịnweghị njem n’oge ezumike, ụfọdụ nnukwu nri ndị Danish na-anwale gụnyere:
Flæskesteg, asụsụ Danish nke anụ ezi, bụ otu n'ime nri mba ndị isi mba Denmark, na nke a na-ejekarị n'oge ezumike.
A Danish achịcha, ma ọ bụ ihe ị nwere ike ịmara nanị dị ka Danish, bụ ihe a na-eji edozi achịcha na-atọ ụtọ nke na-ejupụtakarị jelii, marmalade, ma ọ bụ ihe ụtọ ọzọ.
Frikadeller bụ Danish meatballs, ndị dị larịị ma nke a ghere eghe kama akpọrepu, a na-ejikarị gravy ma ọ bụ ihendori (dị ka lingenberry) jee ozi.
A tartlet bụ achịcha a na-eme achịcha, nke enweghị nkenke nri, na ntinye nke nwere ike ịdị ụtọ ma ọ bụ nke anụ ọhịa, n'agbanyeghị na tarts ndị a na-abụkarị ndị sitere na mkpụrụ osisi, na-enwekarị njiri mara.
Know maara na Copenhagen bụkwa ụlọ obibi mbụ nke onye edemede na onye okike nke The Little Mermaid, Hans Christian Andersen?
Iji kwanyere ugwu ama ama Andersen, a akpụrụ akpụ nke otu aha E wuru ya na mpaghara ọwa mmiri na 1913, ma ka bụ otu n'ime “ebe nlele” mbụ n'oge njem ọ bụla na Copenhagen. Gbalịa kwụsị site na nrịgo nke Nyhavn, wee were azụ a ama ama see foto.
Category: ụlọ, Ụbọchị Njem, Denmark, Europe, Njem njem, Hotels, Nhazi njem Tags: ahịa ekeresimesi, copenhagen, njem ụbọchị, Denmark, Obodo Békè, ezumike njem, nyhayn
← Akwukwo nke Anakpo Saag
N'ụdị Camembert na Red Currant Sauce →
2 Comments na "Etu aga emefu ụbọchị 1 na Copenhagen"
Nke a mara mma dị ịtụnanya, Daalụ maka blog gị 🙂